Sanduuqyada qashin-qubka ah ee beerta ku yaal | Bogagga rinjiga bilaash ah ee loogu talagalay
Sanduuqyada qashin-qubka ee isku-dhafan ee beerta
Sanduuqa qolalka guriga lagu sameeyo: sida ay u shaqeyso!
Xaggee bay tahay in sanduuqa lagu dhajiyo sariirta?
Badanaa iyo in ka badan waxaad ku aragtaa beeraha ama kaymaha: sanduuqyada kulaylaha ee shimbirahayaga gudaha ah. Maxay yihiin dad badan oo aan loo baahnayn ama xitaa hiwaayad, laakiin waxay badbaadinayaan shimbiraha qaar ee xilliga qaboobaha.
Sanduuqyada qashin-qubka ah ee loogu talagalay inay noqdaan meel loogu talagalay maalmaha qaboobaha qabow
Isku-dhisto sanduuqyada kulaylaha ma aha oo kaliya hotbeds, laakiin sidoo kale u adeegtaa jiilaalka sida hoyga ka soo qabow. Xogta Ilaalinta Xayawaanka Jarmalka xitaa waxay u muuqataa in aan la haynin qoyaanka taranka shimbiraha, sababtoo ah geedaha duugoobay iyo kuwa qashinka ah ayaa ka maqan keynta, xitaa godadka dabiicigu waa yar yahay.
Samee sanduuqa lafahaaga naftaada
Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in la siiyo shimbiraha leh astaamaha taranta ee foomka of is-dhisay sanduuqyada kulaylaha dalab.
Ku samee sanduuqyada buundada ee leh naftaada
Dabcan waxaad sidoo kale mid keliya ku noqon kartaa sanduuqa kulaylaha Iibso. Laakiin waxay ka dhigtaa mid macno leh oo qurux badan Sanduuqyada qashin-qubka si ay u dhistaan ​​caruurtooda, Marka hore, ficilada wadajirka ah ee la wadaago ayaa si fudud loo wada qaataa, marka labaad, carruurtu waxay wax badan ka bartaan dabeecada shimbiraha iyo doorbidadooda.
Taasi ma sanduuqa kulaylaha Marka la dhiso oo ku raaxeysto booqashada mashquulka ah, caruurtu waxay leeyihiin dareen weyn oo lagu guuleysto sanduuq qashin ah oo iskiis ah. Xilliga jiilaalka, waxoogaa nasiib ah, waxay arki karaan jilbaha, dhoobada, iyo shimbiro kale oo badan - iyo xitaa mindhicirka - daawashada sanduuqa kulaylaha si aad u isticmaasho meel aad seexato.
Gaar ahaan qaboobaha qaboobaha ayaa badbaadiya sanduuq qashin ah oo iskiis ah xataa shimbiraha qaar ayaa nool. Sababtoo ah gaar ahaan xilliga qaboobaha, marka xayawaanku marwalba helayaan cunto yaryar, waxay ku gubaan dufan badan oo jirka ah. Habeen qabow ayaa durbaba xukunka dhimashada.
Der sanduuq qashin ah oo iskiis ah waxaa ugu fiican ee laga sameeyey dhir, qoryo ama alwaax qoryo leh, oo noqonaya qiyaastii laba inch oo qaro weyn. Halkii aad ka ilaalin lahayd qoryaha alwaaxyada (ka hortaga fungal fungal, iwm) waa inaad isticmaashaa saliideedka dharka leh ama rinjiga bey'ada ah, haddii kale waxaad halis u tahay xayawaanka.
Sidoo kale xiriirka ilaalinta dabiiciga ah wuxuu kugula talinayaa inuu isticmaalo muraayad halkii ciddiyaha, sababtoo ah markaas sanduuqa waa la nadiifin karaa ka dib. Aad u muhiim ah waa godadka hawo-qaadashada ee hoose ee sanduuq qashin ah oo iskiis ah.
Iyada oo ku xidhan nooca shimbirta ah ee lagu shubo sanduuqa, mid waa inuu go'aamiyaa qiyaasta daloolka soo galaya. Marka la eego soddon millimitir, tusaale ahaan, xayawaan, tufaax weyn, iyo xargaha shinbiraha ayaa ku dhex mari kara, halka shan iyo labaatan millimitir, uun noocyada kala duwan ee tilmaanku ka samaysan karaan.
Sidoo kale cabbirka gudaha ayaa go'aan ka gaaraya shimbiraha, iyaga sanduuq qashin ah oo iskiis ah xidhiidhaan. Waxaa ugu fiican in la hubiyo carruurtaada horey u shimbiraha aagaggooda ay kuxiraan sanduuqyada caanaha ka dibna markaa si sax ah u hagaajiyaan cabbirka. Saldhigga sanduuqa waa inuu hubaa in ka badan laba iyo toban ilaa laba iyo toban centimitir. Dhab ahaan, buug-gacmeedka dhismaha ee habboon iyo si cad ayaa si fudud looga soo dejin karaa internetka.
Waa kuwan qaar ka mid ah talooyin ku saabsan kor u qaadista sanduuq qashin ah oo iskiis ah, Daloolada dalxiisku waa inay barbar dhigaan bariga iyo sanduuqa waa inay ugu yaraan laba mitir ka sareeyaan dhulka. On geedaha aad awoodo sanduuqyada naas-nuujinta ee iskiis ah lagu hagaajiyo xargaha kabaha ama ciddiyaha aan lahayn.
Intaa waxaa dheer, waa in aad hubisaa in biyuhu aaney geli karin marka uu roobabku: Dhanka kale, sanduuqa ha u badin inuu horay u sii socdo, xitaa haddii aad Einflugloch aad u fiicnayn wax arki kara. Xaqiiji in sanduuqka aan la nadiifin karin martid ama bisadaha!
Meelaha ugu haboon ee geedaha ku yaala waa cufan, caleemo, derbi guri iyo balakoonno. Sanduuqa waa la nadiifiyaa kadib xilliga taranka. Kaliya ka saar buulashii hore iyo sanduuq qashin ah oo iskiis ah cadaydo baxay. U hubso inaad gashato gacmo gashi oo sanduuqa ha kuugu ridin guriga, waxaa jira halis ah cudurka.
Waqtiga ugu wanaagsan, mid sanduuq qashin ah oo iskiis ah laalaabku waa dayrta. Kadibna waad jajabi kartaa oo waad arki kartaa!
Boorka beerta | Beerta guriga aqalka
Abuur sanduuqa sanduuqa carruurta ee beerta
Gingko Biloba | Muuqaalka Botanical iyo ...
Kala samee beerta xayawaanka | Beeraha beerta
Midabaynta guriga bogga leh beerta
Midabaynta bogga qoyska beerta
Sheeko gaaban oo loogu talagalay carruurta - maaraynta beerta
Rinjiyaynta tirada lambarada leh beerta